USihlalo Ophethe weSandals® Resorts Waziwa Njengomholi Wokungenisa Izihambi Emhlabeni Wonke
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba ze-Hotel & Resort » USihlalo Ophethe weSandals® Resorts Waziwa Njengomholi Wokungenisa Izihambi Emhlabeni Wonke
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Abantu • Izindawo zokuhlala • Ukusimama Izindaba • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
U-Adam Stewart ujoyina Ikomidi Eliphethe le-WTTC
Usihlalo Ophethe weSandals Resorts, u-Adam Stewart, umenywe ngokusemthethweni ukuthi ajoyine iKomidi eliPhethe loMkhandlu Wezwe Wokuvakasha Nezokuvakasha (WTTC). Ukwenziwa kumelela ushintsho olwenzekayo kanye nokuqhubekela phambili okwenziwe nguStewart sonke isikhathi sakhe embonini.
I-WTTC imele umkhakha wangasese womhlaba wonke we-Travel & Tourism onamalungu afaka ama-CEO angama-200, izihlalo, kanye nabaMongameli.
U-Adam uletha ulwazi oluningi ngokusebenza eduze nobaba wakhe ongasekho ukwakha lokho manje, okungenye yezimpawu ezaziwa kakhulu embonini yethu.
UStewart uzibophezele ngokuqhubeka nokuqhakambisa imboni ezinze kakhulu futhi ebandakanya bonke abantu kunakuqala.
“Ngiyahlonishwa ngokujoyina iKomidi eliPhethe lenhlangano engiyihloniphe kakhulu selokhu ngiqale umsebenzi wami,” kusho yena U-Adam Stewart, Usihlalo Ophethe we Izimbadada Zonke Izindawo Zokungcebeleka, “Leli thimba lobuholi ligxile kakhulu emizamweni yomkhakha wezokuvakasha nezokuvakasha, futhi ngizimisele ukufaka isandla. Ngokubambisana, sizoqhubeka nokuqhakambisa imboni ezinze kakhulu futhi ebandakanya bonke abantu kunakuqala, sikhumbuza izimboni zethu ezingomakhelwane kanye nohulumeni bamazwe ukuthi ukuhamba kuyisidingo esibalulekile empilweni. ”
I-World Travel & Tourism Council imele umkhakha wangasese womhlaba wonke we-Travel & Tourism. Amalungu afaka ama-CEO angama-200, izihlalo kanye noMongameli bezinkampani ezihamba phambili emhlabeni zeTravel & Tourism ezivela kuwo wonke ama-geographies ahlanganisa zonke izimboni. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-30 iWTTC izibophezele ekuqwashiseni ohulumeni nomphakathi ngokubaluleka kwezomnotho nezenhlalo emkhakheni wezohambo nezokuvakasha.
UJulia Simpson, uMongameli ne-CEO ye-WTTC uthe:
“Ngijabule ukwamukela u-Adam kwiKomidi eliPhethe le-WTTC. U-Adam uletha ulwazi oluningi ngokusebenza eduze nobaba wakhe ongasekho ukwakha lokho manje, okungenye yezimpawu ezaziwa kakhulu embonini yethu. Mina kanye nawo wonke umndeni we-WTTC sibheke phambili ekusebenzeni no-Adam endimeni yakhe entsha. ”
U-Adam noyise "uButch" Stewart
Umbono wokuqala wamalungu omkhandlu owasungula uhlala unjalo: ohulumeni kufanele babone ezokuvakasha nezokuvakasha njengezinto eziseqhulwini, ibhizinisi kufanele lilinganise ezomnotho nabantu, isiko, nemvelo, kanye nokuphishekela ngokuhlanganyela ukukhula kwesikhathi eside. Ubulungu buhlanganisa ububanzi bemboni, kusuka ezindizeni kuya kubaqhubi bezokuvakasha kuya emaqenjini okungenisa izihambi. UMkhandlu oPhethe uqukethe izihlalo, oMongameli kanye nabaPhathi Abakhulu abavela kuwo wonke umkhakha wezokuvakasha nezokuvakasha.
Inhlangano yokuzithandela, ubuholi be-WTTC bubeka isibonelo, banikela ngesikhathi sabo esibalulekile nezinsizakusebenza ukuqhubekisela phambili umsebenzi womhlaba kulelizwe eliguqukayo. Abaholi bezezimboni bamenywe ukuthi bajoyine ukuma kweKomidi eliPhethe njengabagqugquzeli boshintsho oluyisisekelo nokuqwashisa, bakhuthaza ukuhamba okuphephile nokunothisa izinkulungwane zeminyaka ezizayo.
Izicathulo® Izindawo zokuhlala
Izindawo zokungcebeleka zaseSandals® zinikeza abantu ababili abathandana kakhulu nesipiliyoni sothando, iLuxury Included® eholidini laseCaribbean ngaphesheya kwezindawo zayo eziyishumi nesithupha ezingasolwandle eJamaica, e-Antigua, eSanta Lucia, eBahamas, eBarbados, eGrenada naseCuracao evulwa ngo-Ephreli 16. iminyaka, inkampani ehamba phambili yokubandakanya bonke abantu inikeza ukufakwa kwekhwalithi ethe xaxa kunanoma iyiphi enye emhlabeni. Izindawo zokungcebeleka zezimbadada zifaka phakathi i-Love Nest Butler Suites® yesiginesha ekugcineni kokungasese nesevisi; ama-butler aqeqeshwe yi-Guild of Professional English Butlers; iRed Lane Spa®; Indawo yokudlela ye-2022-Star Global Gourmet ™, eqinisekisa utshwala beshelu ephezulu, amawayini we-premium, nezindawo zokudlela ezikhethekile ze-gourmet; Izikhungo ze-Aqua ezinesitifiketi nokuqeqeshwa kochwepheshe be-PADI®; i-Wi-Fi esheshayo ukusuka olwandle ukuya ekamelweni lokulala kanye nemishado eyenziwe ngezifiso. Izimbadada zeSandals ziqinisekisa izivakashi ukuthula kwengqondo kusuka ekufikeni kuya ekuhambeni ne Izimbadada zePlatinum Protocol zokuhlanzeka, izinyathelo ezithuthukisiwe zezempilo nezokuphepha zenkampani ezenzelwe ukunika izivakashi ukuzethemba okukhulu lapho ziseholidini eCaribbean kanye neSandals Vacation Assurance entsha, uhlelo oluphelele lokuvikela amaholide olunesiqinisekiso sokuqala somkhakha seholide yamahhala ezongena esikhundleni kufaka phakathi indiza yezivakashi ezithintekile ngokuphazanyiswa kokuhamba okuhlobene ne-COVID-19. ISandals Resorts iyingxenye yeSandals Resorts International (SRI) ephethwe ngumndeni, esungulwe nguGordon “Butch” Stewart ongasekho, okubandakanya neBeaches Resorts eyakhelwe umndeni. Ngeminye imininingwane ngomehluko weSandals Resorts Luxury Included®, vakashela izimbadada.com.